Buugga Awoodda Woody McClain II: Wareysiga Ruuxa - Dhaqanka Pop
Woody McClain wuxuu ka tallaabaa marxaladda ka baxsan oo wuxuu galayaa Waddooyinka Buugga Awoodda II: Ruuxa
Haddii aad fiiro gaar ah u yeelatay xirfadda Woody McClain sannadihii la soo dhaafay, waxaa suurtogal ah inaad ogaatay isbeddel ku yimid doorashooyinkii hal -abuurka ahaa. Mid ka mid ah majaajilaystayaashii yaraa ee ka goosan jiray Canabka kahor imaanshaha TikTok, McClain ayaa markii ugu horreysay dhadhamiyay sumcad fayrasnaan , markii uu jilaayay Kevin Hart taag-taagyada hoostooda naanaysta WoodyTheGreat. Marka xigta, wuxuu soo jiitay shaashadda yar isagoo ku ciyaaraya xiddig tayo leh oo haddana dhib badan BET -yada Sheekada Daabacaadda Cusub , ka hor inta aan dib loo celin doorka Sheekada Bobby Brown , dib-u-soo-nooleynta jilayaasha cinwaanka ah ee nolosha dhabta ah la halgamaya murugada iyo qabatinka.
Tan iyo maalmihiisii ​​hore ee qosolka intarneedka, doorka McClains ayaa si tartiib tartiib ah u yeeshay mugdi, firfircoonaan, iyo si aad u riwaayad badan. Axaddan (Sebtember 6) markay tahay 9/8c, daawadayaashu waxay arki doonaan isagoo ku biiraya ka ganacsiga daroogada, lacag-sameynta, dib-u-tolidda adduunka Awood —Waa meel, sida uu u sheegay Complex, qofna ma badbaado, [qofna] qof kastaa wuu tagi karaa daqiiqad kasta.
Horyaalka Starz ee Axaddaan, Buugga Awoodda II: Ruuxa waa kii ugu horreeyey ee dabar -goyn badan oo daba socda taxanahii asalka ahaa ee ay abuurtay Courtney Kemp iyo fulinta oo ay soo saartay 50 Cent. Riwaayaddii dambiyada ee la jeclaa waxay soo afjartay socodkeedii lixda xilli-cayaareed iyadoo u dareemeysa sidii qarsoodi dil, iyadoo xubin kasta oo ka mid ah taageerayaashiisa lagu tuhunsan yahay dilka Ghost, jilayaasha ugu waaweyn. Dhammaadkii taxanaha, waxay daaha ka rogtay inuu ahaa Tariq, Ghosts oo inta badan dhibsaday wiil, kaasoo jiidayay kicinta.
Ruux wuxuu bilaabmaa maalmo kadib muujintaas. Tasha, hooyada Tariqs, ayaa si geesinimo leh u qaadatay duubista dilka. Ma awoodo inuu helo dhaxalkiisa ilaa uu ka qalin jebiyo kulliyadda, Tariq wuxuu u jeestaa waddooyinka isagoo rajaynaya inuu helo lacag ku filan oo uu ku bixiyo qareenka difaaca hooyooyinka. Tani waa halka uu kula kulmo Monet, oo ah madaxa qoyska dambiyada xoogga leh oo ay ciyaarayso Mary J. Blige. Qof kale oo muhiim ah oo ka tirsan qoyska Monets ee arxanlaawayaasha ah waa Cane, wiilkeeda daacadda ah iyo gacanta midig, oo lagu sawiray xoogaa aan la aqoon oo ka yimid Woody McClain.
sida loo sameeyo fondant gelatin la'aan
Ka dib maalin duubis ah, Complex ayaa dhowaan McClain kala hadlay horumarkiisa jilaa riwaayad ah, maalintiisii ​​koowaad ee fandom Power, dhammaadkii muranka badnaa ee taxanaha asalka ahaa, iyo khibradiisii ​​ku ciyaarista Mary J. Bliges shaashadda shaashadda qeybta xigta ee soo socota .
Ii sheeg xiriirkaaga asalka ah Awood taxane. Ma waxaad ahayd taageere ka booday?
Ninyahow, bilowgii markii Awood marka hore soo baxay, waxaan ahaa taageere. Kaliya markaan arko qof u eg aniga oo ordaya goob lagu caweeyo - kaliya nin madow oo guulaystay - weligay hore uma arag. Dabcan, in la arko isaga oo qaadanaya dhinaca waddada ayaa aad u xiiso badnaa. Marka, waxaan ku lifaaqnaa laga bilaabo Xilliga 1.
Adigoo ah taageere OG, markii ay hoos u dhacday xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay oo qof walbaa sameynayay kii saadaaliyay Ruuxa, ma adiga ayaa saxsanaa, mise waad khaldantay?
Xaqiiqdii waan khalday… waxaan mooday inay tahay Tommy.
Taasi waa mid xiiso leh Waa maxay sababta Tommy?
Waxaan dareemay in Tommy uu had iyo jeer ka run sheegayo akhlaaqdiisa. [Isaga], waxay ku saabsanayd nolosha dariiqa - oo haddii aadan adigu doonayn, waa inaad tagtaa. Waana ogaa inuusan doonayn Ruuxa inuu noloshaas ka tago. Waxaan u maleeyay ugu dambayntii inuu ka takhalusi doono.
Taasi waxay u egtahay mala -awaal macquul ah. Dhammaan dadka la tuhunsanaa waqtigaas, waxaa hubaal ah inuu u muuqday midka ugu kartida badan inuu dilo. Sideed dareemi lahayd markii aad ogaatay in dhab ahaantii Tariq uu toogtay Ruuxa?
[Taahid] Waxaa igu dhacay dareeno isku dhafan. Laakiin intii aan daawanayey, waxaan ogaaday… Ruuxu wuxuu samayn jiray waxyaabo sidaas oo kale ah markuu da 'ahaan jiray. Waxaan dareemay inay tahay mid ka mid ah waxyaalahaas - waxa hareeraha ka socda ayaa soo socda. Runtii waxaan aaminsanahay karma nolosha dhabta ah. Marka, markii wiilkiisu ku sameeyay isaga, waxaan la mid ahay, Hagaag, waan arki karaa taas.
Taasina waxay ina keenaysaa sheekada Buugga Awoodda II: Ruuxa . Dabeecaddiisa, Tariq, oo hadda hoggaanka u ah taxanahan, sidee bay ahayd la shaqaynta Michael Rainey Jr.?
Oh, nin. Waa wax weyn Michael waa nin weyn. Diirada saaraya, gaajaysan. Iyo, dabcan, si fiican buu u yaqaan dabeecaddiisa. Mar walba waa diyaar. Taasi had iyo jeer waa tan ugu fiican… Inaad hoggaanka ku qabato isla bogga dadka kale.
Markaad ku biirto doorkan Qubanaha, waxaad ku soo galaysaa mid cusub adiga oo la shaqeynaya jilaayaal caan ku ahaa jilashooda sanado. Taasi miyey caqabad ku noqotay?
Haa, taasi waxay ahayd caqabad weyn, daacadnimo. Laakiin Courtney Kemp waxay qabatay shaqo la yaab leh oo ah abuurista buugaagtan si aan runtii u fahanno astaamahayaga oo runtii aan u dhex galno dadka aan fursad u helno inaan ku muujino shaashadda. Aniga ahaan shaqsi ahaan, iyada oo aan Courtney i siinin taas, malaha waan lumin lahaa. Way ogtahay waxa ay rabto oo had iyo jeer way fiican tahay la shaqaynta dadka sidaas ah. Ma aha in aan malayno wax. Waa la wada dhigay. Waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan nolosha ku soo qaadno.
Sawirka iyada oo loo marayo Starz
Ka sokow Courtney oo abuuraysa xayeysiiska, 50 Cent waa soosaaraha fulinta. Tan iyo Sheekada Daabacaadda Cusub , waxay dareemeysaa inaad had iyo jeer la shaqayso halyeeyada. Oo hadda waxaad ku jirtaa bandhig leh Habka Man iyo Mary J. Blige. Sidee yaab leh?
Taasi waxay ahayd waalli. Waali. Xitaa miiskayagii ugu horreeyey akhri, markii ugu horraysay [aan la kulmay] Maryan oo ay la mid ahayd, Sug, ma waxaad tahay wiilkayga? Tani waxay noqon doontaa mid wanaagsan. Ka dibna ku ordaya Habka iyo isaga oo garanaya magacayga oo dhahaya wuxuu ahaa taageere weyn. Taasi waxay ahayd heer xiga, si daacad ah. Wax fikrad ah uma hayn astaamahan waaweyn xitaa way garanayeen qofka aan ahay.
Dabcan, mar kasta oo la shaaciyo daboolis ama taxane, waxaa jira xoogaa shaki ah. Dadka qaar baa isweydiiya, Runtii waxani ma wanaagsanaan doonaan? Ma ku noolaan doontaa IP -kii hore u jiray? Maxaad u sheegi lahayd dadka tabashooyinkaas qaba?
Weligay kamaan fikirin taas hore. Markaan daawanayo an Aargoosatada filim, waligey kuma fikirayo, Tani ma ka fiicnaan doontaa tii hore? Waxaan halkaas u imid inaan ku raaxeysto [filimka] oo aan arko sheeko cusub. Haddaba, loogu [ Buugga Awoodda II: Ruuxa ], taasi marna maankaaga ku soo dhacday. Waxay ahayd, Tani waxay noqon doontaa wax cusub, wax cusub. Waan ku faraxsanahay dadka inay yeeshaan dareen la mid ah markaan baxo oo aan daawado waxyaalaha kabuubyada.
Waxay ila tahay in mashruuc kasta oo cusub oo jilaa qaadanayo uu u taagan yahay nooc ka mid ah horumarka iyaga iyo shaqadooda. Maxaad dhihi lahayd doorkan cusub ayaa kuu metelaya waqtigan xirfaddaada?
Tani waxay ii saamaxday inaan si joogto ah ula shaqeeyo agaasimayaal cusub. Dabcan, markaad ka shaqeyneyso filim, waxaad la shaqeyneysaa hal agaasime. Hawshaan, dhacdo kasta, waxaan la shaqeyneynaa agaasimayaal cusub. Qof walbana wuxuu leeyahay wax u gaar ah. Marka, waxaan ka baranayaa waxyaabo ka duwan kuwaan oo aan ku darayo shaygeyga.
Taasi waa wax aan rabo inaan awoodo inaan sameeyo markaan ku weynaado warshadaha dhexdiisa. Waxaan rabaa inaan awood u yeesho inaan sidoo kale bilaabo agaasinka. Hadda waxaan ahay uun isbuunyo, waxaana dareemayaa in tani ay tahay fursadda ugu habboon ee aan wax ku baran karo.
Waan ku faraxsanahay inaad sheegtay agaasimayaasha. Wax Ive inta badan ka yaabi jiray jilayaasha ayaa ah cidda ay u dhaqmaan. Waxaan hubaa in jilayaasha qaarkood ay u dhaqmaan dadka wax dhaliila, iyagoo rajeynaya inay helaan dib u eegis wanaagsan. Si dareen badan leh, jilayaasha kale ayaa u dhaqmi kara dhagaystayaasha. Adigoo ah qof leh himilo labada dhinac ah, miyaad waligaa si gaar ah ugu dhaqantaa agaasimaha?
Maya, Ive weligeed sidaas uma fikirin. Waxaan dareemayaa inay taasi ixtiraam la'aan tahay dabeecaddaada haddii aad ka fekereyso qof kale oo xaaladda ku jira. Dhammaadka maalinta, waa inaad run u noqotaa dabeecaddaada. Caddaalad ma samayn doontid haddii aadan ixtiraamin dabeecadda.
Sideedse u soo koobi kartaa ixtiraamkaaga dabeecaddan ugu dambeysay?
Waxyaabaha qaarkood ee ku saabsan dabeecadda aan la xiriiro. Markii ay timi Bobby Brown, waxay ahayd jacaylkii uu u qabay bandhigga. Waan la xiriiri karaa taas sidii qoob -ka -ciyaarka hore. Markay timaado Cane, wuxuu ku saabsan yahay qoyska. Arrinkiisu waa reerka marka hore. Waxba igama gelin waxa aan la kulmayo, waxaan hubinayaa in reerkaygu wanaagsan yahay. Taasi waa wax aan la xiriiri karo nolosha dhabta ah. Waxba igama gelin, waxaan hubin doonaa in qof kasta oo qoyskayga ka mid ah uu haysto baabuur ka hor inta aanan xataa midna iibsan. Waxaan mar walba ka hormariyaa reerkayga. Markaa, sidaas baa [aan ka fikiraa] kaalin kasta oo aan qaato - waxaan hubiyaa inaan la xiriiri karo heer shaqsiyeed iyo mid dhab ah.
xageen ku iibin karaa kabaha ii dhow
sida loo barto qurxinta keegga guriga
goormay soo baxday maalintii xornimada?
sida loo sameeyo calooshaada